Farfalla FAC-ZS868 Air-Cooler (100 Watts) | Buy online | SHOP.COM.MM
Farfalla FAC-ZS868 Air-Cooler (100 Watts)
အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ဖြင့် အဆင့် ၃ဆင့် အအေးမြှင့်နိုင်မှု
လေထု ပူနွေးစိုစွတ်မှုနှင့် သန့်စင်မှုအား ပြုလုပ်ပေးသော နည်းလမ်း
၁၆ နာရီ မိနစ် ၃၀ခန့် Timer
ပျားအုံသဏ္ဍာန် ရေငွေ့ပျံကိရိယာ တပ်ဆင်ထားခြင်း။
Mg Khaw Lay
ဒါလေးသုံးပြီးနောက်ပိုင်း အိပ်ရေးဝလာတယ် မျက်နှာလေးတောင်ဖောင်းလို့ Read more Hide
A friend of mine is willing to purchase an Air cooler.
So I recommanded this one for him.
Farfalla air cooler လေးသုံးလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လေလဲများများထုတ်ပေးနုိုင်တယ်။ Read more Hide
Farfalla Air Cooler
Farfalla air cooler က အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး လေးအေးအေးလေးတွေ ထုတ်လွှတ်ပေးလို့ အရမ်းကြိုက်တယ်။ Read more Hide
Specifications of FAC-ZS868 Air-Cooler (100 Watts)